Ndingaita mari yakawanda sei kubhadhara maSeO services?
Pane mibvunzo miviri inowanzobvunzwa "Inobhadhara mari yakawanda sei?" Uye "Zvinotora nguva yakareba sei kuchengeta SEO yekutanga?" Kana vanhu vachifunga nezvazvo, izvi hazvisi pasina chikonzero chakanaka. Haisi basa rakanyanya kuongorora kutsvaga kwekutsvaga injini sekupedzisira mari yekubhadhara SEO maitiro inobva pane chikonzero chezvikonzero. Mutengo we SEO unobatanidza zvakananga nemigumisiro inogona, uye indasitiri uko iwe unoda kukurudzira bhizinesi rako. Mutengo wekubhadhara maitiro eSOO unogonawo kusiyana nekuda kwehukuru hwekugadzirisa (nyika, nyika, nyika, guta, guta kana micro-nzvimbo). Ichi chikonzero, hongu, chichaita kuti mutengo we SEO uve nemamiriro ako akasiyana.
Nhasi, ndinoda kutarisa kuburikidza nezvibatsiro zvekutsvaga kwehupenyu kuburikidza nekutsvaga injini yekutsvaga kuti ipe tsanangudzo yakajeka pamusoro penyaya "Mari yakawanda yakabhadharwa neSeO?" Pasinei nokuti uri kutungamirira bhizimusi guru kana bhizinesi rekuno, mutungamiri uyu achakubatsira kuti uone kuti mari yako inofanirwa kutarisa mune zvekutsvaga kwehupenyu.
Ndezvipi zvinhu zvinogona kugadzirisa zvakabhadharwa SEO service cost?
Pane zvinhu zvitatu zvakasiyana-siyana zvaunofanira kuongorora paunosarudza SEO yako kukosha. Kutanga pane zvose, ndeye mamiriro ezvinhu (uripi pane zvakakonzerwa nenzvimbo), zvinangwa (ndezvipi zvinangwa zvebhizimisi rako?) Uye nguva yemazuva (unotsvaga kutsvaga zvakadini?). Zvose zvikwata zve SEO zvinofunga nezvezviitiko izvi apo kuverenga kuti mari yakabhadharwa SEO inofanirwa kubhadhara bhizinesi rako. Zvinoreva kuti kuburikidza nekuongorora mamiriro evanhu varipo, kunyatsonzwisisa zvinangwa zvebhizimisi nekugadzirisa nguva inodiwa, kambani yekutsvaga kugadzirisa kambani inogona kuverenga mutengo. Uyezve, nzvimbo yako yekutengesa ichagadzirisa mari inobhadharwa SEO services. Kana iwe uchiwana mari inodarika $ 200 kubva pane chimwe chinhu nekutungamira mutsva, unogona kutarisira kubhadhara zvishomanana kana iwe unotarisira mutengi akakodzera madhora mazana. Seo nyanzvi dzinofunga pamusoro pekudzoka pamusoro pekutsvaga mari, nhamba yako yemusika inogona kutonga mutengo kusvika pamwero wakafanana. Mutengo unogona kuve wakakwirira kana sangano reSeO richave rakagadziriswa kugadzirisa hurongwa kumamiriro akasiyana-siyana uye zvimwe zvinangwa zvebhizimisi.
Zvimwe zvinodhura zvakabhadharwa SEO mazano
Kuti ikubatsire kuronga bhajeti yako, unoda kuziva kuti uchadirei kushandisa mari. Heino kuongororwa kwehuwandu hwezvinodhura maererano nematatu ekubhadhara mafungiro emhando (mwedzi nemwedzi / chibvumirano / purojekiti-yakatevedzerwa).
Kuchengetedza mwedzi wega wega SEO mazano ekubhadhara
Mishandiro emwedzi yega rega inodhura anenge $ 750 - $ 5,000 pamwedzi. Pano mari yekushandiswa kwehutano inogona kuvimba nehukuru hwezvinoda zvebhizimisi uye huwandu hwehupi hupi hwakapiwa neOO agency. Makambani mashoma eSeO anopa huwandu hwehutano hwehutano hunove nematengo anodhura kupfuura e-stack digital agents. Mazhinji emabhizinesi anobhadhara pakati pe $ 2,000 ne $ 5,000 pamwedzi weSeO mazano.
Chibvumirano chakabhadharwa SEO nhepfenyuro mari
A mutengo wechibvumirano wakabhadhara SEO services. Munguva ichangobva kubudiswa mawebsite uye vatsva mune imwe nzvimbo yekutengeserana kwema digital vanosarudza chibvumirano cheSeO services senzvimbo yekupinda. Iri rudzi rwemashumiro anopa vadzidzisi webhusaiti nezvose zvakakosha pakugadzirisa maitiro, analytics, uye kutsigirwa nguva dzose. Chibvumirano SEO mazano anogona kugoverwa muhuwandu hwekutengeserana kwemashoko (kusvika pa $ 0,50 neshoko), kubhizimisa mabasa (kubva pamadhora mazana mashanu kusvika ku $ 8,000 pamushandi mumwe chete), kubatanidza maitiro ekuongorora (kubva pamadhora 500 kusvika ku $ 7 500 purojekiti), uye SMM services ($ 500- $ 3,500).
Pricing based based price
purojekiti uye yezvino webhusaiti yemamiriro ezvinhu. Kana imwe purojekiti inoda ruzivo rwakakosha uye software yekugadzirisa, purogiramu yemitengo yakabhadharwa SEO services inokura zvishoma pa15%. Mishonga yakawanda inodhura kubva pa $ 1 000 kusvika ku $ 30,000.
Zuva rekutsvaga maawa
Maawa eOlyly SEO mazano anobhadhara mari kubva pa $ 50 kusvika $ 300 paawa Source .